Part1: Iji Ken Burns mmetụta na gị Mac
part2: Iji Ken Burns mmetụta na ihe iPad
Part3: Olee ka ibubaa a video on Windows Desktọpụ iji a kwesịrị ekwesị ngwá ọrụ?
iMovie bụ otu n'ime ndị kasị mma video Ndinam / edezi software ngwa-eresị ndị Apple Inc. maka iOS ngwaọrụ. Site n'enyemaka nke a ngwa otu onye nwere ike ịkpachapụ anya hazie ha na obere vidiyo na-atụgharị ha n'ime obere fim ma ọ bụ trailers ma na-ele ha site uche n'ebe ọ bụla na ha chọrọ. iMovie awade ụfọdụ keukwu atụmatụ, dị ka 'Ken Burns Mmetụta', nke dị nnọọ mfe na kemfe atụmatụ ndị chọrọ ime ka ha na-emepụta fim / ụgbọala na-adọkpụ ọzọ kenkwukorita. Isiokwu a ga-eduzi otu on otú e si eji Ken Burns mmetụta maka ma Mac na iPad ọrụ.
Nzọụkwụ 1: Site n'ụlọ window gị MacBook, ẹkedori iMovie omume na họrọ chọrọ video na ị chọrọ ka ịgbakwunye mmetụta.
Nzọụkwụ 2: Ozugbo ị họrọ gị chọrọ video, usoro ihe omume a ga-egosi ihe dị iche iche mkpachị / okpokolo agba ndị video no notu nke na ihe omume nchọgharị window na elu n'etiti òkè nke iMovie oru ngo ihuenyo. Họrọ clip nke ị na-achọ itinye Ken asakde mmetụta na ọ ga-egosi na kwekọrọ ekwekọ edezi onyenlereanya ngalaba.
Nzọụkwụ 3: Mgbe ị họrọ clip ị chọrọ ịrụ ọrụ, na pịa na "n'Ubi" bọtịnụ nke na-họpụtara a square na 2 edoghi na odude ke ufọt ebi ndụ kewara ndị top oru ngo wọkspeesi na ala. Nke a button ga-eme ka elu "Fit," "n'Ubi," na "Ken Burns" video edezi mmetụta jidesie họrọ video clip n'ime edezi nkiri.
Nzọụkwụ 4: Na video edezi ihuenyo, họrọ Ken Burns mmetụta emi odude ke akuku elu akaekpe. Nke a na n'aka ga-eme ka abụọ rectangles nke na-akwanyere ùgwù na agba, tumadi acha uhie uhie na green.
Nzọụkwụ 5: Ọ niile-abịa ala na n'ọnọdu nke n'elu kwuru banyere rectangles na-emepụta na Ken asakde mmetụta. The red rektangulu a na-eji ịnọ na ọgwụgwụ ọnọdụ nke mmetụta ebe green rektangulu a na-eji ịnọ na mmalite ọnọdụ nke mmetụta, na bụ, site ebe zooming na amalite (ndụ ndụ rektangulu) na ebe zooming na nsọtụ (red rektangulu ).
Ma nke rectangles bụ resizable na kemeghi ikwe mmadụ iji mmetụta ya n'elu ọtụtụ finesse.
Nzọụkwụ 6: Tupu ị kechie ihe elu, na-eche free ka ịhụchalụ mmetụta site ọkụkụ na play button ugbu ke video nchịkọta akụkọ window. Kpatụ rectangles na ha akụkụ ọ bụrụ na achọrọ.
Nzọụkwụ 7: Pịa mere mgbe ị na afọ ojuju site mgbalị gị ịzọpụta gị dezie video. Ị ọma na-eji Ken Burns mmetụta.
The usoro dị nnọọ ka ahụ dị ka onye na-eji maka MacBook. Nanị dị iche bụ na otu onye anaghị enweta nkasi obi nke edezi na iPad na onye ahụ na mgbe na-eme ya na a MacBook.
Nzọụkwụ 1: Site gị ngwa tree, enweta na iMovie na ngwa ma họrọ chọrọ video na ị chọrọ ọrụ na ya.
Nzọụkwụ 2: Họrọ etiti na-ịchọrọ ị na-arụ ọrụ na.
Nzọụkwụ 3: Kpatụ jidesie akuku icon wee họrọ Ken Burns mmetụta.
Nzọụkwụ 4: Dị nnọọ ka mere na a MacBook, kpatụ na bugharia na rectangles dị ka uche gị na otú ị chọrọ mmetụta na-arụ ọrụ.
Nzọụkwụ 5: ịhụchalụ clip na-eme mgbanwe ya ruo mgbe ị ga-esi ihe ị chọrọ.
Nzọụkwụ 6: Kpatụ mere na-ekwe ka ngwa hazie dum video ma nye ya na gallery ugbu a.
Zooming na a video bụ ekwe omume na ndabere media ọkpụkpọ maka Windows. N'ihi na a ga-ekwe omume, otu onye ga-achọ ka a dị ike edezi ngwá ọrụ na a mbugharị na na mbugharị si ọrụ. Onye na-eduga bụ Movavi Video Editor. Nke a nchịkọta akụkọ dị mfe ịghọta na iji.
N'ihi na availing mbugharị na atụmatụ awa site Movavi Video Editor, onye kwesịrị eso nyere nzọụkwụ n'okpuru na a kwesịrị ekwesị ejiji iji hụ kacha pụta.
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye Movavi Video Editor na gị na desktọọpụ.
Nzọụkwụ 2: Họrọ ị media faịlụ na ị chọrọ dezie. Ozugbo họrọ, ịdọrọ faịlụ ka usoro iheomume osisi.
Nzọụkwụ 3: Họrọ mmetụta ebi ndụ, mgbe ahụ, gbanwee na pịa mbugharị na-esi. Gbanwee oyiyi ebe ị chọrọ mmetụta na-etinyere.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a na ntọala ebi ndụ, kpatụ mbugharị na ire ụtọ na mbugharị si ire ụtọ parameters na pasent. N'ihi na nghọta, ma ọ bụrụ na gị ịtọ mbugharị na ire ụtọ na-0, ị ga-enweta a mbugharị si mmetụta n'ihi na ị video na osote itughari.
Nzọụkwụ 5: Mgbe ịtọlite ​​parameters, chekwaa clip mgbe ị na-eche na afọ ojuju na ya preview.
Ọ dị mfe mbugharị na otú a. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, ị ga-nanị n'anya iMovie, n'ihi na ọ bụ a otutu ihe dị mfe ime ya. Na Wondershare si Video Ntụgharị, ị na-adịghị ka nchegbu banyere ihe ọ bụla video nsogbu, ọ bụla ọzọ.
> Resource> iMovie> Olee ka ibubaa iMovie on Mac / iPad